Ifektri yesamente eyongezelelweyo - iChina yesamente eyongezelelweyo Abavelisi, abaxhasi
JS-104 Polycarboxy ezimbaxa ...
Polycarboxylate kaEtere Monom ...
I-GQ-KG (L) / 01/02 iArhente yokuBamba iintambo
I-GQ-KG t inezinto zokukhulisa ezincinci, ukusebenza okuphezulu kokunciphisa amanzi, izinto ezahlukeneyo ezingaphiliyo kunye nezinto eziphilayo ze-polym kunye ne-PO, i-42.5 yesamente. Fluidity egqwesileyo, oluludaka oluzinzileyo, inqanaba lokugcwalisa elungileyo, akukho ukuncipha, ukwanda okuncinci, akukho zinto ziyingozi ekomelezeni. Yi-gro
I-GQ Defoamer sisiphene esinikezelwe kwi-polycarboxylate superplasticizer. I-GQ defoamer isebenza ngokukhawuleza, ngokuzinzileyo kwaye inokuthintela ukuvelisa i-bubble ixesha elide.
I-GQ-SN yokudibanisa ukuLungelelanisa ukuTyibilika-Ulwelo (alkali-simahla)
I-GQ-SN luhlobo lwesinyanzelo sekhonkrithi eselulwelo sombuso. Elona candelo liphambili le-GQ-SN yi-sodium aluminate. Umxube usetyenziselwa ikakhulu ikhonkrithi efafaziweyo; inokukhawulezisa inkqubo yokuqinisa ikhonkrithi ngokufanelekileyo, kwaye inezibonelelo zokuxinana kothuli olusezantsi, ukomelela okuphantsi, ukuphakama kwexesha elide
I-GQ-210 Ummeli wamandla okuqala
Le mveliso yenziwe ngokudityaniswa kwezinto ezahlukeneyo zamandla okuqala. Isetyenziswa ikakhulu kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi zekhonkrithi ezineemfuno zamandla kwangoko kunye namaxesha obushushu asezantsi. Umgangatho wemveliso ufikelela kumgangatho we-GB8076.
Ummeli we-Antifreeze ye-GQ-208
I-GQ-208 iqulathe icandelo lokunciphisa amanzi kunye nezinto ezahlukeneyo ezingaphiliyo, izithako zokubulala izityalo eziphilayo kunye necandelo lamandla kwangoko. Isetyenziswa ikakhulu ekwakheni ubusika kuzo zonke iintlobo zekhonkrithi eyakhiwe endaweni, ikhonkrithi yangaphambi kokufakwa. Umgangatho wemveliso kwiJC475 kunye neminye imigangatho.
Kwiselulosi kaEtere HPMC for Ukutyabeka / eziphathekayo / Grout njengoko Agent Water-Ukugcina
I-HPMC imfutshane ngeHydroxypropyl Methyl Cellulose, ayinabumba, ayinambitheki, ayinabungozi kumgubo omhlophe. Kwakhona Non-ionic neselulosi kaEtere. Isetyenziswa njengokuqinisela, ukuzinzisa, iarhente yokugcina amanzi, i-emulsifier. Ingasetyenziswa ngokubanzi kumashishini afana nezinto zokwakha, iipeyinti kunye nokwaleka